Na -enyocha transistor: kọwara nzọụkwụ site nzọụkwụ na n'ụzọ dị mfe | Ngwaike efu
Isaac | 23/09/2021 09:00 | Ihe eletrọniki
Oge ụfọdụ gara aga, anyị bipụtara nkuzi maka otu ị ga -esi lelee capacitors. Ugbu a ọ bụ oge onye ọzọ akụrụngwa elektrọnik dị mkpa, kedu ka ọ dị. Ebe i nwere ike ịhụ otú lelee transistor kọwara n'ụzọ dị mfe na nzọụkwụ site na nzọụkwụ, ị nwere ike iji ngwaọrụ dị ka multimeter mee ya.
na A na -ejikarị transistors eme ihe n'ọtụtụ igwe elektrọnik na eletriki maka ijikwa ngwaọrụ steeti a siri ike. Yabụ, ebe ha na -adịkarị, ị ga -ahụrịrị okwu ndị ị ga -enyocha ha ...
2 Nzọụkwụ iji lelee transistor bipolar
Ọ bụrụ na ịnweela ezigbo multimeter, ma ọ bụ multimeter, nke ahụ bụ naanị ihe ị ga -achọ ịnwale transistor gị. Ee, nke a Multimeter Ọ ga -enwerịrị ọrụ iji nwalee transistors. Ọtụtụ igwe ihe dijitalụ dijitalụ nke oge a nwere njirimara a, ọbụlagodi ndị dị ọnụ ala. Site na ya ị nwere ike tụọ NPN ma ọ bụ PNP bipolar transistors iji chọpụta ma ha nwere nkwarụ.
Ọ bụrụ na nke ahụ bụ ikpe gị, naanị ị ga -etinye ntinye atọ nke transistor na oghere nke multimeter nke egosipụtara maka ya, ma debe onye ahọpụtara na Ọnọdụ HFE iji tụọ uru. Yabụ ị nwere ike nweta ọgụgụ wee lelee mpempe akwụkwọ data ma ọ bụrụ na ọ dabara na ihe o kwesịrị inye.
Nzọụkwụ iji lelee transistor bipolar
Ọ bụ ihe nwute, ọ bụghị multimeters niile nwere njirimara ahụ dị mfe, yana nwalee ya n'ụzọ aka na multimeter ọ bụla, ị ga -eme ya n'ụzọ dị iche, yana ọrụ nnwale «Diode».
Ihe mbụ bụ iwepu transistor na sekit ka ị nweta ọgụgụ ka mma. Ọ bụrụ na ọ bụ ihe mebere nke edozighi, ị nwere ike chekwaa usoro a.
Nwale Ntọala nye onye nyere ya:
Jikọọ ụzọ dị mma (ọbara ọbara) nke multimeter na ntọala (B) nke transistor, yana ihe ọjọọ (nwa) na -eduga na emitter (E) nke transistor.
Ọ bụrụ na ọ bụ NPN transistor nọ n'ọnọdụ dị mma, mita kwesịrị igosi mgbada ọkụ n'etiti 0.45V na 0.9V.
N'ihe banyere PNP, ekwesịrị ịhụ mkpụrụedemede OL (N'ime Oke) na enyo.
Nwale Ala maka onye nchịkọta:
Jikọọ ụzọ dị mma site na multimeter ruo na ntọala (B), yana ụzọ adịghị mma na onye nchịkọta (C) nke transistor.
Ọ bụrụ na ọ bụ NPN nọ n'ọnọdụ dị mma, ọ ga -egosi mbelata ọkụ n'etiti 0.45v na 0.9V.
N'ọnọdụ ịbụ PNP, mgbe ahụ OL ga -apụta ọzọ.
Nwale Onye na -enye ya ka ọ bụrụ ntọala:
Jikọọ waya dị mma na emitter (E) yana waya na -adịghị mma na ntọala (B).
Ọ bụrụ na ọ bụ NPN nọ n'ọnọdụ zuru oke ọ ga -egosi OL oge a.
N'ihe gbasara PNP, a ga -egosi dobe 0.45v na 0.9V.
Nwale Mkpokọta ka Base:
Jikọọ ihe dị mma nke multimeter na onye nchịkọta (C) yana ihe adịghị mma na ntọala (B) nke transistor.
Ọ bụrụ na ọ bụ NPN, ọ kwesịrị ịpụta na ihuenyo OL iji gosi na ọ dị mma.
N'ihe banyere PNP, ọdịda ga -abụrịrị 0.45V na 0.9V ma ọ bụrụ na ọ dị mma.
Nwale Mkpokọta ka Emitter:
Jikọọ eriri uhie na onye nchịkọta (C) yana waya ojii na emitter (E).
Ma ọ bụ NPN ma ọ bụ PNP zuru oke, ọ ga -egosi OL na ihuenyo.
Ọ bụrụ na ị tụgharịa wires, nke dị mma na emitter na adịghị mma na onye nchịkọta, ma na PNP na NPN, ọ kwesịkwara ịgụ OL.
Ọ bụla nha dị iche iche nke ahụ, ọ bụrụ na eme ya nke ọma, ga -egosi na transistor adịghị mma. Ị ga -eburu n'uche ihe ọzọ, na nke ahụ bụ na nnwale ndị a na -achọpụta naanị ma ọ bụrụ na transistor nwere obere sekit ma ọ bụ mepere emepe, mana ọ bụghị nsogbu ndị ọzọ. Yabụ, ọbụlagodi na ọ gafere ha, transistor nwere ike ịnwe nsogbu ọzọ na -egbochi ịrụ ọrụ ya nke ọma.
N'ọnọdụ ịbụ a ihe ntụgharị FET, ọ bụghị onye bipolar, mgbe ahụ ị ga -eji igwe dijitalụ ma ọ bụ analog gị soro usoro ndị a:
Tinye multimeter gị na ọrụ nnwale diode, dị ka ọ dị na mbụ. Wee tinye nyocha ojii (-) na ọdụ Drain, yana nyocha ọbara ọbara (+) na ọdụ Isi mmalite. Nsonaazụ kwesịrị ịbụ ọgụgụ 513mv ma ọ bụ ihe yiri ya, dabere n'ụdị FET. Ọ bụrụ na enwetaghị ọgụgụ ahụ, ọ ga-emeghe ma ọ bụrụ na ọ dị oke ala ga-adị mkpụmkpụ.
Na -ewepụghị ọnụ ojii site na ọwa mmiri, dobe ọnụ uhie na ọnụ ọnụ ụzọ ámá. Ugbu a ule ekwesịghị ịlaghachi ọgụgụ ọ bụla. Ọ bụrụ na ọ gosipụtara nsonaazụ ọ bụla na enyo, mgbe ahụ a ga -enwe mgbapụta ma ọ bụ sekit dị mkpirikpi.
Tinye n'ọnụ ya n'isi, nke ojii ga -anọkwa na mmiri mmiri. Nke a ga-anwale nkwụsị Drain-Source site na ịgbalite ya na ịnweta ọgụgụ dị ala banyere 0.82v. Iji gbanyụọ transistor, ọdụ ụgbọ ala ya atọ (DGS) ga-anọrịrị obere oge, ọ ga-esite na steeti ahụ laghachi na steeti na-abaghị uru.
Site na nke a, ị nwere ike nwalee ụdị ụdị FET, dị ka MOSFET. Cheta inwe njirimara nka ma ọ bụ akwụkwọ data nke ndị a iji mara ma ụkpụrụ ị nwetara zuru oke, ebe ọ na -agbanwe dabere n'ụdị transistor ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Na -enyocha transistor: akọwara ya site na nkwụsị